ဖြေးဖြေးလေး နဲ့ ငြိမ့်ငြိမ့်လေး
တိပ်ခွေ ခေတ်တုန်း က စွဲစွဲလန်းလန်း နားထောင် ခဲ့တဲ့ သီချင်း၊ ပလေးဘွိုင်းသန်းနိုင် နဲ့ အယ်လ်ခွန်းရီ တို့ ရဲ့ ဖြေးဖြေးလေး နဲ့ငြိမ့် ငြိမ့်လေးပါ။
ဦးသန်းနိုင်တို့ ဆိုထားတဲ့ အထဲမှာ ဘုရားသခင်တွေ ဘာတွေ ပါတော့ ကော်ပီများ ဖြစ်မလား မသိဘူး ဆိုတဲ့ သံသယ တော့ ဖြစ်မိတယ် ။
ဒါပေမယ့် အဲဒါလေး ကိုပဲကြိုက်နေမိတာ။ အဲဒီခေတ် တုန်း က ဘာသီချင်း ဘယ်သူ ဆိုတာ လဲ ရှာရခက်တော့ အော်ရီဂျင်နယ် သီချင်း က ဘယ်ဟာမှန်း မသိခဲ့ဘူး။
နောက်တော့ ဂစ်တာတီး သင်ပေးတဲ့ ဆရာ တစ်ယောက်က အင်္ဂလိပ် လို ဆိုပြတော့မှ သြော် ဒါက ဒီသီချင်းပါလား ဆိုတာ သိရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြေးဖြေးလေး နဲ့ ငြိမ့်ငြိမ့်လေး က နားထဲ စွဲနေတုန်း။
နောက်ပိုင်းမှာ Swing Low Sweet Chariot ကို Eric Clapton ဆိုတာ ကိုပဲ နားထဲ စွဲပြီး ဘယ်သူ ဆိုတာမှ မကြိုက်တော့ဘူး။
နောက်ပိုင်း အဆိုတော် ဖြစ်တဲ့ Ella Eyre ပြန်ဆို ထားတာလည်း ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် Eric ကြီး ဆိုထား တာကိုပဲ သဘောကျ နေတုန်း။
အင်တာနက် တွေ ဘာတွေ ခေတ်စား လာပြီး ဒီ သီချင်း ရာဇဝင် တွေ ဘာတွေ ရှာကြည့်မိတော့မှ eric ကြီးတို့ပိုင်တာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာလည်း သိရပြန်ရော။ 1909 လောက်မှာ ကတည်း က Record လုပ် ခဲ့တာ လို့ သိရပြီး B.B king တို့လို ဆရာ့ ဆရာကြီးတွေလည်း ဆိုထားဖူး တယ်လို့ ဖတ်ဖူးတယ်။
မြန်မာ ဗားရှင်း ဖြစ်တဲ့ ဖြေးဖြေးလေး နဲ့ ငြိမ့်ငြိမ့်လေး ကို ထူးအိမ်သင် နဲ့ ဘိုဘို တို့ ဆိုထား တာလည်း နားထောင်ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဦးသန်းနိုင် တို့ ဆိုထား တာကို ပိုက်ကြိုက်တယ်။
အခုတော့ ကြာသပတေး နံ နဲ့ စတဲ့ အဆိုတော် ဆိုထားကို FM တစ်ခု ရဲ့ Facebook page မှာ ကြည့်လိုက်ရ တယ်။
ဒါပေမယ့် နားထဲ စွဲပြီးသား ဖြစ်တဲ့ အရင် ဖြေးဖြေးလေး နဲ့ ငြိမ့်ငြိမ့်လေး ကို ပဲ ကြိုက်မိနေတယ်။
စကားမစပ် ဒီ သီချင်း ကို ပလေးဘွိုင်း အဖွဲ့ ဆိုတာ ကို ကြိုက် တဲ့ လူတွေ ရဲ့ အသက် ဟာ မငယ်တော့ဘူး။ :P
Post By A random thoughts ofaBurmese man at Monday, January 29, 2018 No comments:
Labels: ဖြေးဖြေးလေး နဲ့ ငြိမ့်ငြိမ့်လေး
London Notting Carnival 2016
2016 Notting Hill Carnival မှာ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေ ကိုတင်ပေးလုိုက်ပါတယ်။
အဲဒီ ပွဲက အရောင် အသွေးစုံစုံ၊ တေးသံ မြူးမြူးကြွကြွ၊ ကရစ်ဘီယံ အက တွေနဲ့ လှည့်လည် ကပြ ကြတာပါ။
ယူကေ နွေရာသီ ရဲ့နောက်ဆုံး လက်ကျန် နေ့ရက်တွေ ဆိုတော့ တခါတရံမှာ နေရောင် က အစွမ်းကုန် တောက်ပ နေပါတယ်။
ခပ်မြူးမြူး တေးဂီတရယ်၊ နွေရာသီ လက်ကျန် နဲ့ လင်းထင်း နေတာတွေရယ် ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အရောင်း ခပ်ပြင်းပြင်း ဓါတ်ပုံတွေ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Post By A random thoughts ofaBurmese man at Saturday, September 10, 2016 No comments:
Danish Girl (Movie Review)
သူ့ရဲ့ ကိုယ်နေဟန်ထား ကို သရုပ်ပြခုိုင်းပြီး ပန်းချီ ဆွဲရင်းနဲ့
အိမ်ထောင်ဘက် က တစ်နေ့မှာ သူ ဖုံးကွယ် ထားတာ ကုို အမှတ်မထင် သိရှိသွားသည်။
အစ ပထမ တော့ ရုိုးရုိုးတန်းတန်း ပဲ ထင်လို့ နားလည် ပေး ခဲ့သည်။
တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ သူ့ရဲ့ အတွင်းစိတ်က ဖုံးကွယ်လုို့ မရခဲ့။
မိန်းမ ကြည်ဖြူပြီ အထင်နဲ့ သူကလည်း အတွင်းစိတ်ကို အိမ်မှာ မဖုံးကွယ်တော့။
အိမ်မှာ မိန်းမရဲ့ အဝတ်အစားတွေ ယူဝတ်၊ မိတ်ကပ်တွေ လိမ်းချယ် ဝတ်ဆင် နေထုိုင်သည်။
လင်ကိုယ် မယားမို့ မိန်းမ ပျော်ရွှင်အောင် စ နောက် နေတာလုို့ပဲ မိန်းမက တွေးထင် ထားခဲ့သည်။
တစ်နေ့တော့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရဲ့ ပါတီ လာရောက်ဖို့ ဖိတ်ကြား ခံရတဲ့ အခါမှာ မိန်းမ ဖြစ်သူ က မိန်းခလေး အသွင်ယူ ပါတီတက်ဖို့ ပြောလာတော့ စ နောက်ယုံ သဘောနဲ့ သူကလည်း လက်ခံ ခဲ့မိသည်။
ပါတီမှာ သူ့ရဲ့ သွင်ပြင်ကို ယောက်ျား တွေက မြင်ပြီး သဘောကျတော့ သူကလည်း စိတ်ထဲမှာ သာယာ မိသည်။
ယောက်ျား လေး တစ်ယောက် က တွေ့ဆုံဖို့ အတင်း လုိုက်ကပ် နေခဲ့တာကို မနည်းပင် ရှောင်ပြေးခဲ့ရသည်။
မိန်းမ က မဖြစ်တော့ဘူး ရပ်တန်းက ရပ်ဖို့ ပြောလာတာကို မရပ်တန့်ဘဲ နောက်ဆုံး Gender ပြောင်းဖို့ပင် ကြိုးစားတော့သည်။
(The Theory of Everything နဲ့ အော်စကာ ရခဲ့တဲ့ Eddie Redmayne ကြီး သရုပ်ဆောင်ထား တာ အတော် ကောင်းတဲ့ အပြင် Alicia Vikander လေးရဲ့ သရုပ်ဆောင် ချက် တွေကလည်း အင်မတန်မှ ပြောင်မြောက် ပြီး လှလည်း လှ၊ ဆက်တင် ကောင်း ကောင်း ပြီးတော့ ကင်မရာ မြင်ကွင်း ကောင်းကောင်း၊ ကာလာတွေ စုံစုံ လင်လင် နဲ့ ကြည့်လို့ ကောင်းတဲ့ ရုပ်ရှင် ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့် ဝေဖန်သူတွေက တကယ့် အချက်အလက်တွေကုို ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ချန်ထားခဲ့သည် ဟု ပြောကြသည်။ )
Post By A random thoughts ofaBurmese man at Saturday, February 20, 2016 No comments:
A visit to Blackpool pleasure beach
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့ (၂၀.၇.၂၀၁၅) က မန်ချက်စတာ မြို့ နှင့် ဘလက်ပူးလ် မြို့ တုို့ကုို တစ်ညအိပ်၊ နှစ်ရက် အမြန် ခရီး သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ခရီးစဉ် အတွင်း ရုိုက်လာခဲ့တဲ့ ပုံတွေထဲမှ အချို့ ကုို ဘလော့ခ်မှာ ဖော်ပြလုိုက်ပါတယ်။ ခရီးစဉ် အကြောင်း အသေးစိတ် ရေးလုိုသော်လည်း လုပ်ငန်း ခွင် ပြန်လည် ဝင်ရောက် ရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် အချိန်မရတော့လုို့ ဓါတ်ပုံများပဲ တင်လုိုက်ပါတယ်။
Post By A random thoughts ofaBurmese man at Saturday, July 25, 2015 No comments:
Labels: Black and White Photography, blackpool, colours
ဒီနေ့ Paulton theme park ထဲက Peppa Pig World ကုို ရောက်ဖြစ်တယ်။ လန်ဒန် ကနေ ကားမောင်း သွားရင် တစ်နာရီ ကျော်လောက် မောင်းရတယ်။
ကာတွန်းကားတွေ အောင်မြင် ပြီးသွားရင် နောက်ဆက်တွဲ စီးပွားရေးလည်း လုပ်လုို့ ရသေးတယ်။ ကားတွန်းဇာတ်လမ်းထဲက ကာရုိုက်တာတွေ လုပ်ပေးထား၊ ဇာတ်လမ်း ဇာတ်အိမ် ထဲက အတုိုင်း အဆောက်အဦးတွေ ဆောက်ပေးထား ပြီး ကလေးတွေ အတွက် ကစားကွင်း တွေ လုပ်ပေးထားတာ၊
ကလေးတွေက သူတုို့ ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကားတွန်း ဇာတ်ကောင်တွေကုို မြင်ရ၊ တွေ့ရ၊ အတူတူ ကစားရလုို့ သဘောတွေကျ၊ မိဘတွေကတော့ ပုိုက်ဆံပေးပေါ့လေ။ ကုိုယ့်သားသမီး ဆုိုတော့လည်း လုိုက်မပုို့ရရင် စိတ်ထဲမှာ မကောင်းဖြစ်ဆုိုတော့ ကုန်ပါ့စေပေါ့လေ။ အိမ်က ကုိုယ့်သား ကတော့ အဲဒီ့ ကာတွန်း ဇာတ်လမ်း တွဲတွေကြည့် ပြီးရင် အဲဒီ့ theme park တွေကုို လုိုက်ပုို့ပေးဖုို့ ချည်း ခဏခဏ ပူဆာနေတတ်တော့တာ။
Post By A random thoughts ofaBurmese man at Thursday, June 18, 2015 No comments:
ဓါတ်ပုံ မရုိုက်ဖြစ်တာလဲ အတော်ကြာပြီ။ ကြာဆုို အလုပ် တစ်ဖက်၊ ကျောင်းတစ်ဖက်၊ မိသားစု တစ်ဖက် နဲ့ မုို့ လူက ခုနှစ်ရက် တစ်ပါတ်လုံးကုို မအားနုိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဟုိုး အရင် အားခဲ့တဲ့ အချိန်တုန်းက သွား၊ လာ၊ ရုိုက်ကူး ခဲ့တာလေးတွေကုို ကင်မရာထဲမှာ ပြန်တွေ့လုို့ တင်လုိုက်တယ်။
Post By A random thoughts ofaBurmese man at Wednesday, April 08, 2015 No comments:
A random thoughts ofaBurmese man
စာလုံးများ သေးသည်ဟု သင်မြင်ရပါက Ctrl + ကို နှိပ်ကာ အကျယ်ချဲ့ ၍ ကြည့်ပါလေ....။
ရောက်တက်ရာရာလေးများ London Black and White Photography Burma news political ကဗျာ street photography 2013 Aung San Su Kyi Blogfest.asia News peoples photography Barcamp Yangon Donation Film Gmail Internet Reith lectures 2011 VOA for nay phone latt general japan's tsunami poem sanctions အင်တာဗျူး 1980 Phone Maw's Day In RIT. 2010 88 generation students AIM AOL Asean Aung San Su Kyi's message to Brighton Festival BCY2010 invitation BDC Barcamp Myanmar Big Ben Bilingual Language Book Blog Action Day 2010 Blog book Blog day seminar 2010 Blogger's Story Borobudur Britney Spears's Twitter Browser were woman Buddha's Birthday Buddha's Birthday ... Burma Human Right Day (Phone Maw's Day) Burma Soldier Calling Cheese Rolling Chiswick town hall Circus Comedy Copy Ringt for blog Daw Aung San Su Kyi Special Message Daw Su's 16th FEB video message Deer Demostration Documentary FIFA President visits Burma February 13 Gmail Group HMS belfast Joke Knownledge LOOK Light trail Malaysia Martyr Day 2011 Memorial Of MBS First Seminar Min Zayyar Mr.Oba Mao My Selection Photos Nat Pwe Nine Nine Wedding Photos Nokia 5230 North Korea Pattaya PullQuote Rachel goldwyn Resistance Day Richard Avedon Royal Wedding SOAS SPIP Training Save the planet earth Son Songkrang Tag Game Tech Technology Tyndale Seminar UK VSCO Vesak day Zawgyi Myanmar Unicode amazing photos announcement barcamp yangon press release blackpool blog day 2009 brick lane burma passport burmese media bushy park canary wharf carnival cartoon city hall colours corruption covent garden economic electricity and water free applications fujifilm gmail new version google gtalk high jobless rate interview ipad2learning web design london eye making fun money memories of Tar Yar Min Wai(1) merry christmas min ko naing moving myanmar pro league myanmar's new year nineninesanay's wedding other photoshop tips richmond park secret love shoe sunday market sunset time zone timelapse tourist attraction place tower bridge twitter victoria beckham blog watch home westminster what is browser? wimbledon window7wordpress x100 ဟိုဒီအတွေး ရောက်တတ်ရာရာ ဟိုဟို ဒီဒီ ဖြေးဖြေးလေး နဲ့ ငြိမ့်ငြိမ့်လေး